Debian Bullseye Installer Yechitatu Alpha Shanduro Iye Zvino Yava Kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
Debian Bullseye Installer Yechitatu Alpha Shanduro Iye Zvino Yava Kuwanikwa
Munguva pfupi yapfuura Yechitatu alpha vhezheni yemusimudziri yakaburitswa. chii chichava chikuru chinotevera vhezheni Debian 11 "Bullseye", iyo yakarongerwa kuburitswa muzhizha 2021 (kana zvinhu zvikaenda sekuronga kwevanogadzira).
Pakazosvika Ndira 12, 2021 (zvingangoita mumazuva mashoma) enhanho yekutanga yechando inorongwa yeiyo pasuru base, iyo inoreva kugumiswa kwekuitwa kwe «shanduko» (kuvandudza mapakeji ayo anoda kugadzirisa kutsamira kwemamwe mapakeji, izvo zvinotungamira mukubviswa kwenguva pfupi kwemapakeji kubva kuTesting), pamwe nekumiswa kwemapakeji ekuvandudza anodikanwa iyo yekuvaka (kuvaka -inokosha).
Nezve shanduko dzakakosha muiyi yekumisikidza kubvira yechipiri alpha vhezheni, isu tichakwanisa kuzviwana izvo Tsigiro yemitauro 78 yakawedzerwa kune iyo inosimudza, Kunze kwaizvozvo patova nerutsigiro ruzere rwemitauro gumi nematanhatu.
Uye zvakare, tinogona kuona kuti iyo itsva alpha vhezheni Iyo inozivikanwa, nekuda kweshanduko kubva kuLinux kernel 5.9.0-4 kuenda kuLinux vhezheni 5.9, kunyangwe zvichitaurwa kuti pamwe hwaro huchave Linux 5.10 sezvo ichave yakareba-tsigiro kernel (LTS) iyo ichachengetwa kwenguva inokwana makore mashanu.
Mumwe mutsauko unozivikanwa neiyi Debian yekumisikidza yekugadzirisa ndeye partman-auto yekuparadzanisa otomatiki iyoe inowedzera saizi ye / bhutsu, sezvo panopatsanurwa / bhuti bhagi, seyakazara dhisiki yekushandisa kesi, saizi yacho ichave ingangoita 512 kusvika 768M panzvimbo ye128 kusvika 256M sekutadza kwazvino.
Kuwedzera uku kunoitwa sezvo default pari zvino yagara ichionekwa se "diki kwazvo", sezvo kakawanda kernel mifananidzo isingatokwanise kupinda / mubhuti isina vanhu.
Imwe shanduko yakakosha iri maererano neapurani ARM64, sezvo zvave yakaunza grafiki nyowani uye muunganidzwa muGTK.
Kana ari akawedzera rutsigiro, tinogona kuwana yeNanoPi NEO Mhepo, ShamwariARM NanoPi NEO Plus2 mahwendefa, Pinebook, Pinebook Pro, Olimex A64-Olinuxino, A64-Olinuxino-eMMC, SolidRun LX2160A Honeycomb, Clearfog CX, SolidRun Cubox-i Solo / DualLite uye Turris MOX.
Zvakare nerutsigiro rwe firefly-rk3399, pinebook-pro-rk3399, rockpro64-rk3399, rock64-rk3328 uye rock-pi-4-rk3399 arm64 board mune u-boot uye netboot mifananidzo. Mufananidzo weFirefly-RK3288 waendeswa kune u-boot nyowani.
Yeimwe shanduko dzinomira yeiyi nyowani alpha vhezheni yemusimudziri:
Yakagadziriswa mashandiro eU-Boot system kana uchibhura kuburikidza neEFI.
Wakawedzera udeb neF2FS rutsigiro.
Wakawedzera ntfs-3g package yeArm64 architecture.
Wakawedzera rutsigiro rweOLPC XO-1.75 malaptop.
Imwe CD imaging ine Xfce desktop nharaunda yakamira.
2 & 3 DVD ISO imaging yakamiswa kune amd64 / i386 masisitimu.
Wakawedzera udeb wireless-regdb-udeb kuLinux inovaka, kusanganisira nic-wireless modules.
Iwo marongero eConsoon akavandudza rutsigiro rwezviratidzo zvepseudographic uye akavandudza iyo Terminus font.
Debian-cd yakavandudza iyo diki yekuisa kubatanidza.
Iyo Linux kernel yakagadziridzwa kuita vhezheni 5.9.
Iyo libkmod2-udeb package yakatsiviwa ne kmod-udeb.
Yakaparadzaniswa yekuvaka kutsamira pane fdisk inokurudzirwa arm64, amd64, uye i386 masisitimu, asina kusungirirwa ku-linux.
Grub2 yakawedzerwa kune yakavakirwa-mumunda wekushandisa.
Tsigiro yemupstart system manejimendi yamiswa zvachose.
Yakagadziridzwa grub inosimudza matemplate ekugara eEFI masystem uye mitsva mhando yekuchengetedza.
Hukuru hwe / bhutsu yekuparadzanisa yekuzvipatsanura yakawedzera
Yakagadziridza sarudzo yekuchinjanisa saizi yekuparadzanisa, uchifunga huwandu hwe RAM.
Iyo win32 loader inoratidzira UEFI boot maneja uye inowedzera rutsigiro rwekuchengetedza bhuti.
Lilo-inosimudza uye elilo-inosimudza yakasarudzika kubva kune ese udeb mavakirwo.
Pakupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve shanduko dzakabatanidzwa mune ino alpha vhezheni yeDebian 11 simaki, unogona kutarisa iwo madhiri Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Debian Bullseye Installer Yechitatu Alpha Shanduro Iye Zvino Yava Kuwanikwa
kwete kwete uye kwete akadaro
Zvekare ndichitaura zvisina maturo nezve debian, ini ndinopokana zvakanyanya kuti anotevera debian anotakura kernel kana 5.9 kana zvakatonyanya iyo kernel 5.10 kunyangwe iri lts. Kana debian achizivikanwa, izvo kubva pane zvaunonyora, zviri pachena kuti kwete, zvinonyanya kuzivikanwa kuti dhiani rakatsiga, rinogara rakavakirwa pamatsetse, echokwadi lts uye kuyedzwa uye kutadza, ndosaka debian 10 rakavakirwa pa 4.19 uye debian 11, ndinogona kukuudza nekuchengeteka kwakazara kuti ichave yakavakirwa pane lts 5.4 kernel, inova ndiyo yakaedzwa uye yakaedzwa lts kernel iyo ipapo, iyo 5.10 kernel, haisati yabuda uye nezhizha, ndiko kwete kernel yakaedzwa uye yakakundikana kune yakagadzika debian, sezvo isu tiri kutaura nezve yakadzikama debian, debian kuyedza icho chimwewo chinhu uye kuyedza kana zvave zvechizvinozvino.
Pindura kune nonoyno
Zvinogona kunge zviri …… kunyangwe kana paine nyaya yekuti inosanganisira yekupedzisira, ichava shamwari yangu
Chii chinonzi IBM? Iyo iceberg iri pasi pekuchinja muCentOS